शासक नांगिइसके, ठमेल नांगिएर के भो ?
बैकुण्ठ भण्डारी, -- जब म नेपाल पत्रकार महासंघ, काठमाडौं शाखाको कोषाध्यक्ष थिएँ, मैले स्थलगत अध्ययन, अनुसन्धान गरेरै लेखे– अव ठमेलमै थाइलैण्ड छ, लाखौं खर्च गरेर यौनक्रिडा गर्न र यौनतृष्णा मेटाउन थाइलैण्ड गइरहनु पर्दैन ।
सभ्य समाजको जतिसुकै चर्चा गरे पनि ठमेल दिनदिनै नाङ्गिै गएको छ, सर्वाङ्ग नाङ्गो छ, नाङ्गिन अथवा नाङ्गोपन हेर्न थाइलैण्ड गइरहनु पर्दैन । केही समयअघि टीभी जर्नालिष्टहरुले ठमेलको दिनको र रातको जीवनचरित्रलाई देखाएका थिए । ठमेलमा मसाज सेन्टरहरु छन्, ती सेन्टरहरुमा मसाज कम र बेश्यावृत्ति बढी हुनेगरेको छ ।
मलाई जाने.. भन्दै भित्र लगे, छानी छानी युवतीहरु बिक्न तैयार थिए, प्रत्येक उमेरका खरिदारहरु यौन किन्न र भोग्न तैयार थिए । ठमेल प्रत्येक पल यसैगरी नाङ्गिरहेको छ, बेचिइरहेको छ, सभ्यतालाई समात्न दौडिरहेको छ । आधुनिक सभ्यता भनेको सायद खुलापनबाट नाङ्गोपन हो क्यार । ठमेल आधुनिक नेपालको शिखरमा पुग्नका लागि हतासिएको छ । जुन देशमा इमान, धर्म र नैतिकता नांगिदैजान्छ, त्यो देशमा युवती नांगिए भनेर के आपत्ति प्रकट गरिरहनु र ?
कुनै बेला वामदेव गौतम गृहमन्त्री थिए । पोखरा नाङ्गिन हतारिएको र नाङ्गिएर सेक्स पर्यटनमा व्यापक सहयोग गरिरहेको देखेर प्याच्च भनिदिए– अव नेपालमा रेड लाइट एरिया तोक्ने बेला भयो, रेडलाइट कानुन बनाउने बेला भयो । त्यसपछि हंगामा के भयो, वामदेव मौन भए । लामो अन्तरालपछि फेरि चुनाव आएको छ । वामदेव गौतम चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा सनसनी फैलिदै गएको छ । यसपटक उनले सेक्स पर्यटन, सेक्स सभ्यता, रेडलाइट एरियालाई कसरी नियाल्छन् हेर्न बाँकी छ । वामदेव गौतमकै अग्रसरतामा रेडलाइट इलाका तोकेर कानुन बनाउलान् कि ?
पार्वती थापालाई मगर आइजीपी बन्नबाट जबरजस्ती रोकियो । खिलराजको निजामती सरकारले पार्वतीमाथि अन्याय गरेर आफ्ना बाहुनचरीलाई कनिष्ठबाट बरिष्ठमा मात्र लगेनन्, आइजीपी समेत बनाइदिए । पार्वती थापा मगर त्यस्ती प्रहरी हाकिम थिइन्, जसले रेडलाइट इलाका नतोकेसम्म बलात्कारका घटना रोकिन्न भन्ने प्रत्यक्ष अनुभव गरेकी थिइन् । महिला हिंसा रोक्न हिडेकी पार्वतीमाथि नै सरकारले हिंसा गरिदियो, उनलाई आइजीपी बन्न दिइएन, अवकाशमा पठाइयो ।
अर्थात्, राजधानीमा २ लाखभन्दा बढी महिलाहरु बेश्याबृत्तिमा लागेको बताइन्छ । कतिपय सौखका लागिसमेत यौनतृष्णा मेटाउन यस्ता धन्दामा लागेका छन् भने कतिपय घरवार चलाउन, बालबच्चा र बृद्धबृद्धा पाल्नका लागि बाध्य भएर बेश्यावृत्ति गर्ने गरेका छन् । कहालीलाग्दो अवस्था छ, वेश्यावृत्तिको । कानुनले सीमा नतोकेसम्म, कानुन नबनेसम्म बेश्यावृत्ति ठमेलमै जस्तो गरी अूध्यारो कोठामा मसाजका नाममा होस्, उपचार अथवा सिधै थाइलैण्ड जानेकि भनेर ग्राहक तानेर होस्, बेश्यावृत्ति सदाबहार चलिरहेकै छ । यो यौन व्यवसाय निरन्तर चलिरहेकै छ । निरन्तर...।
प्रहरीलाई थाहा छ, प्रशासनलाई थाहा छ, नीतिनिर्माताहरुलाई थाहा छ, कानुन निर्माताहरु त बेश्यावृत्ति गर्दागर्दै समातिएका थिए, समातिने डरले भागेका घटनाहरु पटक पटक सार्वजनिक भइरहेकै छन् । भागेर यो समस्याको समाधान हुनसक्दैन ।
आजको पुस्ता साप्ताहिक पढ्छ, यौनसन्देश, प्रेमसन्देश दिन्छ, प्रेम दिवस मनाउँछ । हातहातमा मोवाइल छ, मोवाइलमै पोर्नो हेर्छ र खुसी हुन्छ र रमाउँछ । वर्तमान पुस्ता चुरोट ट्याप लगाउँछ, बार डान्समा जान्छ, दोहोरीमा नाच्छ, सानै उमेरदेखि वियर तन्काउँछ, ह्वीस्कीमा मस्त हुन्छ । यौन खुलापनलाई अव रोकेर रोक्न सकिन्न । ड्रगको लत, चोरीचकारीका घटना, हत्या, अपहरण र माफियाको चंगुलमा फस्ने फसाउने कार्यमा पनि नाङ्गोपन बढी जिम्मेवार रहेको छ ।
नाङ्गोपनले नेपालीपन, नेपाली संस्कृति र संस्कार नासिदै जान थालेको छ । समाजका मूल्य र मान्यताहरु धरासायी बन्दै गएका छन् । युवा बर्ग ज्यादातर विदेशमा रोजगारी खोज्न गइरहेको छ र बिभिन्न रोगव्याधि भित्र्याइरहेको छ । उनीहरुसँगै खुला समाजको मान्यता, फेसन पनि भित्रिदैछ । चिन्ता लिने कहिले ?